Dowladda Australia oo ka hortimid in isbitaalka lagu booqdo gabadhii Somaliyeed ee Jazeerada Nauru isku gubtay.. - iftineducation.com
Dowladda Australia oo ka hortimid in isbitaalka lagu booqdo gabadhii Somaliyeed ee Jazeerada Nauru isku gubtay..
iftineducation.com – Iyadoo Hodan Axmed Barre lagu dabiibaayo Isbitaalka Royal ee Magaalada Brisbane, ayaa waxay Dowladda Australia ka hortimid in la soo booqdo gabadhaasi.
Hodan Axmed Barre oo Isniintii shalay isku gubtay Jazeerada Nauru, ayaa waxaa maanta si de deg ah loogu qaaday dalkaasi Australia, ka dib markii la sheegay in xaaladeeda caafimaadeed ay tahay mid aad u liidata.
Ehelada gabadhan iyo Somalida kale ee ku dhaqan Magaalada Brisbane, ayaa waxaa loo sheegay inaanay soo booqan karin gabadhaasi, illaa iyo inta ay warqado ogolaansho ka soo qaadanayaan Laanta Socdaalka.
C/laahi Maxamed Cali oo ka mid ah Somalida ku sugan Magaalada Brisbane daneynaysa inay ka warqabto xaaladda caafimadeed ee gabadhaasi, ayaa sheegay inay adag tahay in warqado ogolaansho ah laga helo Laanta Socdaalka Australia.
Hadalhaynta ugu badan ee dalka Australia, ayaa waxaa noqotay gabadha Somaliyeed ee 21-ka jir ah, ee isku gubtay Jazeerada Nauru, ka dib markii Dowladda Australia ay ka biyo diiday inay magangelyo siiso.
Shacabka reer Australia, ayaa barraha bulshada ku baafinaaya qoraalo ay ku muujinayaan sida ay kaga xun yihiin in muddo toddobaad ah ay laba qof isugu gubto xero qaxooti oo ku taala Jazeeradaasi.
23 jir u dhashay dalka Iran, ayaa toddobaadkii hore isku gubay Jazeeradaasi, markii loo diiday in magangelyo la siiyo, iyadoo Arbacadiina uu u geeriyooday waxyeelada ka soo gaartay dabka.
Dowladda Australia, ayaa xeryo qaxooti ka furtay Jazeeradaha Badwaynta Pacific-ga, halkaasoo ay dib u dejin ugu sameyso dadka sida sharci darrada ah ku imaanaaya dalkeeda.
Yurub oo “taageeri doonta” dal ku gal la’aanta Turkiga
Gabar Soomaaliyeed oo isku gudbtey Jasiiradda Nauru ee Badweynta Baasifikada